Uluhlu lweMichiza ekhoyo ngokuqhelekileyo
Le yoluhlu lweekhemikhali eziqhelekileyo kwaye apho unokufumana khona okanye ukuba ungabenza njani.
acetic acid (CH 3 COOH + H 2 O)
I-acid acetic acid (~ 5%) ithengiswa kwisitolo sokutya njengeviniga emhlophe.
i-acetone (CH 3 ICANDELO 3 )
I-Acetone ifumaneka kwezinye izisusa zokukhupha iipilisi kunye nabanye abashicileli bepende. Ngamanye amaxesha kufumaneka ibhalwe njenge-acetone ecocekileyo.
Isilonda se-aluminium (ivenkile) i-aluminium ecocekileyo. Ngaloo ndlela intsimbi ye-aluminium kunye ne-aluminium sheeting esithengiswa kwivenkile ye-hardware.
i-aluminium potassium sulfate (KAl (SO 4 ) 2 • 12H 2 O)
Le nto igugu esithengiswa kwivenkile.
i-ammonia (NH 3 )
I-ammonia engenamandla (~ 10%) ithengiswa njengomhlambisi wendlu.
i-ammonium carbonate [(NH 4 ) 2 CO 3 ]
I-salt smelling (ivenkile yezilwanyana) i-ammonium carbonate.
i-ammonium hydroxide (NH 4 OH)
I-Ammonium hydroxide inokulungiswa ngokuxuba i-ammonia yasekhaya (ithengiswe njengecocekileyo) kunye ne-ammonia eqinile (ithengiswa kwamanye ama-pharmacy) ngamanzi.
ascorbic acid (C 6 H 8 O 6 )
I-Ascorbic acid i-vitamin C. Ithengiswa njengeiphilisi ze-vitamin C kwi-pharmacy.
i-borax okanye i-sodium tetraborate (Na 2 B 4 O 7 * 10H 2 O)
I-Borax ithengiswa ngesimo esiqinileyo njenge-booster yokuhlamba impahla, yonke into ecocekileyo kwaye ngezinye izihlandlo njenge-insecticide.
I-asidi ye-Boric iyathengiswa ngefomu ecocekileyo njengepowder yokusetyenziswa njenge-disinfectant (icandelo le-pharmacy) okanye inambuzane.
I-Butane ithengiswa njenge-flugh light.
i-calcium carbonate (CaCO 3 )
I-Limestone kunye ne-calcite yi-calcium carbonate. Ama-eggshell nee-seashell zi-calcium carbonate.
i-calcium chloride (CaCl 2 )
I-calcium chloride inokufumaneka njenge-booster yokuhlamba impahla okanye njengetyuwa yendlela okanye i-agent-de-icing agent. Ukuba usebenzisa ityuwa yendlela, qiniseka ukuba i-calcium chloride ecocekileyo kwaye ayikho umxube weetidi ezahlukeneyo. I-calcium chloride nayo iyisithako esisebenzayo kumswakama onomtsalane weDampRid.
i-calcium hydroxide (Ca (OH) 2 )
I-calcium hydroxide ithengiswa ngempahla yensiya njengoko i-lime okanye i-lime yomyezo we-garden ukunciphisa ubunqweno bomhlaba.
i-calcium oxide (CaO)
I-oxide ye-calcium ithengiswa njenge-quicklime kwiindawo zokuthengisa ezakhiwayo.
i-calcium sulphate (CaSO 4 * H 2 O)
I-sulfate ye-calcium ithengiswa njenge-plaster yaseParis kwiivenkile zobugcisa kunye neendawo zokuthengwa kwezakhiwo.
I-carbon emnyama (i-carbon amorphous) inokufumaneka ngokuqokelela isothu ekutshiseni ngokupheleleyo kweenkuni. Igrafite ifumaneka njengepencil 'lead'. Iidayimane zikhempyutheni.
i-carbon dioxide (CO 2 )
Iqhwa elomileyo i- carbon dioxide eqinileyo , elinciphisa i- carbon dioxide gas . Ukusetyenziswa kwamakhemikhali amaninzi kuguqula i-carbon dioxide gesi, njengendlela yokusabela phakathi kweviniga kunye ne-baking soda ukwenza i-acetate ye-sodium .
Intambo yethusi engaxutywanga (kwivenkile ye-hardware okanye i-electronics store)
ubhedu (II) i-sulfate (CuSO 4 ) kunye ne-copper sulfate pentahydrate
I-copper sulfate inokufumaneka kwi-algicides ethile (Bluestone ™) kwiindawo zokugcina izixhobo zamanzi kunye ngamanye amaxesha kwimveliso yegadi (Root Eater ™). Qiniseka ukuba ukhangele itekisi yeemveliso, ekubeni ezininzi zeekhemikhali zingasetyenziswa njenge-algicides.
I-helium ethe tye ithengiswa njengegesi. Ukuba ufuna kuphela encinane, vele uthenge ibhaluni egcwele i-helium.
Ngaphandle koko, i-gas supply ngokuvamile ithwala le nto.
Iinqwelo zensimbi zenziwe ngeyinyithi yesixhobo. Unokwakhetha iifowuni zesebe ngokusebenzisa umbane kumhlaba wonke.
Insimbi yentsimbi itholakala kwiimpawu zokuloba.
i-magnesium sulfate (iMgSO 4 * 7H 2 O)
I-Epsom salts, ngokuqhelekileyo kuthengiswa kwi-pharmacy, i-magnesium sulfate.
I-Mercury isetyenziswe kwezinye i-thermometers. Kunzima ukufumana ngaphezu kwexesha elidlulileyo, kodwa ezininzi iimpompo zasekhaya zisasebenzisa i-mercury.
i-naphthalene (C 10 H 8 )
Ezinye i-mothball zi-naphthalene ecocekileyo, nangona uqwalasela izithako kuba ezinye zenziwa ngokusebenzisa (para) dichlorobenzene.
Ipropane njengoko kuthengiswa njengebhayiki yegesi kunye nefuthe le-torch fuel.
i-silicon dioxide (i-SiO 2 )
I-silicon dioxide ifumaneka njengesihlabathi esicocekileyo, esithengiswa kwintsimi kunye nezakhiwo zokuthengwa kwezakhiwo. Igrumbi ephukile yenye imvelaphi ye-silicon dioxide.
I-potassium chloride ifumaneka njengetyuwa lite.
i-bicarbonate ye-sodium (NaHCO3)
I-bicarbonate ye-sodium i- baking soda , ithengiswa kwiivenkile zokutya. i-chloride ye-sodium (NaCl)
I-chloride ye-sodium ithengiswa njengetyuwa yetyuwa. Khangela iindidi ezahlukeneyo zetyuwa.
i-hydrodium i-hydroxy (i-NaOH)
I-hydrodium i- hydroxy isisiseko esomeleleyo esinokuthi sifike ngezinye izihlandlo ngokucoca. Ikhemikhali ecocekileyo i-waxy emhlophe eqinile, ngoko ke xa ubona eminye imibala kwimveliso, lindela ukuba iqulethe ukungcola.
i-sodium tetraborate decahydate okanye i-borax (Na 2 B 4 O 7 * 10H 2 O)
sucrose okanye saccharose (C 12 H 22 O 11 )
I-Sucrose iyinombolo yeshukela evamile. Ishukela egciniweyo elimhlophe libhetele lakho. Kukho izongezo kwishukela le-confectioner. Ukuba iswekile ayicacanga okanye imhlophe ibe iqulethe ukungcola.
i-sulfuric acid (H 2 SO 4 )
I-acid yebhethri ye-car i malunga ne-40% ye -acid ye-sulfuric . I-asidi ingagxininiswa ngokuyilisa, nangona inokungcola kakhulu ngokukhokela, kuxhomekeke kwimeko yebhatri xa i-asidi iqokelelwa.
Iibhloko ze-Zinc zingathengiswa ngeendawo zokugcina izithengi zombane zokusetyenziswa njenge- anode . Iimakhishithi ze-Zinc zingathengiswa njengophahla ekukhanyeni kwezinye izakhiwo zokuthengiswa kwezakhiwo.
Ndingayisebenzisa njani i-Baking Powder kunye ne-Baking Soda?
Bangaphi Abadlali kwiMidlalo yeMidlalo?
Hlola iNqanaba lokuThuthukiswa kweMiFluid kwiFork Truck yakho
Imfutshane, Imbali ebuhlungu yeBlues
USanta Francis wase-Assisi washumayela njani intshumayelo yeentaka?
Ubunwele obukhuselekileyo ebuYuda